ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံးသော့►️တွေ့ရှိအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု
မကြာသေးမီကာလ၌အများဆုံးအခြေအတင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများတစ်ခုမှာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မည်သို့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်သို့ကိုက်ညီအကြောင်းပါ။ ဤသူကားအပုခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ရှိမရှိတော့လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအားဖြင့်ဖျော်ဖြေဆန္ဒပြပွဲများပေါ်လာနှင့်သော့ချက်ပြဿနာများကိုတစ်ခုဖြစ်သည်မဟုတ်သောကြောင့်, အကြမ်းမဖက်ဘို့ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ pursues ။
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ကဒီလယ်ကိုအတွင်းရာဇဝတ်လုပ်ရပ်ကျူးလွန်သောသူသည်လူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အဥပဒေများကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံရှိပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကဒီလိုမျိုး၏ပြဿနာတစ်ခုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဆိုပါကသူကထည့်သွင်းစဉ်းစားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် ရှေ့နေများအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုရှာသူတို့ကခံရပြီတစ်ချိန်ကအနုစိတ်ဖြေရှင်းကူညီရန်ဤမြေကွက်၌ကောင်းသောကျွမ်းကျင်သူများကနိုင်ပါတယ်ကတည်းက။
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိကွောငျးအရှိဆုံးလေးနက်ပြဿနာများ၏တဦးတည်းဖြစ်နေဆဲနှင့်စိတ်ခံစားမှုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပါဝင်သည်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုရေးပဋိပက္ခများသည်အမြဲတမ်းတူညီနယ်ပယ်အတွင်းပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့်ဤအကြမ်းဖက်မှုစုပေါင်း လိင်တူချစ်သူ သို့မဟုတ်မိသားစု, သားသမီး, အမျိုးသမီးဒါမှမဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုလူများ၏အခြားမည်သည့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှအခြားအုပ်စုများအကြား။
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၏ရာဇဝတ်မှု ဒါဟာပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်အတွင်းအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဥပဒအတွင်းစုဆောင်းနေသည်။ ရှေ့အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောသကဲ့သို့သင်တို့အခြေအနေမျိုးကြုံနေရနေတယ်ဆိုရင်အရည်အချင်းအာဏာပိုင်များကိုသွားသို့မဟုတ်ဤအခြေအနေဖြေရှင်းချက်ထားရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
1 အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု: အဓိပ္ပာယ်
2.1 ကျနော်တို့ကျူးကျော်၏ဤအမျိုးအစားပေါ်ပညတ္တိကျမ်းနှင့် ပတ်သက်. ဘာသိရသလဲ
6 လူတို့သညျဆန့်ကျင်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု: သည်ဟုရှုထောင့်တာ
La အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ် ဒါဟာဝေါဟာရကိုအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်အတူတူစကားလုံး "domo", ဆိုလိုသည်မှာအိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ် home အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်ရည်ညွှန်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသည်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများသောအားဖြင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှမိသားစုဝင်တစ်ဦးကကျူးလွန်များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အား, နှောင့်ယှက်, ခြိမ်းခြောက်မှုသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်များအသုံးပြုခြင်းကနေအထိအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များလည်းပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအလွဲသုံးစားမှု လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးပတျသကျ။
အဆိုပါတစ်ခုမှာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများဒါဟာမကြာခဏလူမှုရေးအမည်းစက်ဖြစ်ပြီးကျူးလွန်တစ်ဦးချင်းစီလုပ်ရပ်များအတွက်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏တိုင်ကြားချက်ကို run ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးမကြာခဏဖြစ်ကြပြီးကတည်းကထိုသို့အမှန်တကယ်ဒေတာရေတွက်ရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအာဏာပိုင်များပုံမှန်ထက်ပိုမိုဘုံအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားကျယ်ပြန့်စံချိန်ကိုစောင့်ရှောက် hampers ။ အဘယ်အရာကိုအသက်အရွယ်အကြောင်းပိုဘုံဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဘုံများမှာလူမှုစီးပွားရေးအဘယ်အရာကိုအဆင့်ဆင့်။
ဒါဟာအကူအညီတောငျးဖို့လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, တစ်ဦးဥပဒေရေးရာဖြေရှင်းချက်ရှာအံ့သောငှါအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏စစ်တမ်းများအရသိရသည်အများဆုံးဖြစ်ပွားမှု underreported ရောက်ရှိဖို့ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိခိုက်လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိသားစု၏အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူမှုရေးအထီးကျန်၏ညွှန်းကိန်းများအကြားကြောင်းသည်နှင့်မ ပင်, မိတ်ဆွေစက်ဝိုင်းအခြားအဖွဲ့ဝင်များမှရေတွက်ခံရဖို့။
တာပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အကြောင်းဆွေးနွေးမယ် မကြာခဏပြုလုပ်ကျားအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေနှင့်အထွေး.
ရှင်းလင်းဖို့ပထမဦးဆုံးအရာနှစ်ဦးစလုံးကိန်းဂဏန်းများများမှာပေမယ့်များသောအားဖြင့်မိသားစုမှာဖြစ်ပေါ်လျက်, ရာဇသတ်ကြီးဆောင်းပါးများအကြမ်းဖက်မှုမရှိတော့အမျိုးအစားများဖြစ်သော်လည်းသိသာထင်ရှားစွာကွဲပြားခြားနားသောအကြမ်းဖက်မှုများနှစ်မျိုး, ဖြစ်ကြ၏ 173 နှင့် 153 အတွင်းစုဆောင်းနေကြသည်ကြောင်း အားလုံးအပြီး။
ကျနော်တို့ကျူးကျော်၏ဤအမျိုးအစားပေါ်ပညတ္တိကျမ်းနှင့် ပတ်သက်. ဘာသိရသလဲ
ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်အတွက်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု ဒါဟာတူညီတဲ့နျူကလိယတွင်နေထိုင်သောသူများကလူအကြောင်းကိုဆိုလိုသည်မှာမိသားစုအတွင်းကျင့်သုံးနေပါတယ်သောအရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီအုပ်စုတစ်စုအတွင်းပေါ်ပေါက်နိုင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်အသူတို့ကိုအကြား link ကိုအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာလိမ့်မည်ဟုပိုပြီးသားကောင်များကာကွယ်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဤအမည်အောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပွားမှုအလွန်ကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အားနည်းချက်ကလူပေါ်, ဒါမှမဟုတ်မွေးစားအိမ်များအစိုးရများအတွက်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဥပဒေ, ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူဖို့ပွင့်လင်းတံခါးကိုအရွက်။ ဒါဟာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်ယူဆနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သည်မဟုတ်ဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတွေ့မှတစ်ခုချင်းစီကိုအမှုလေ့လာဖို့ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့မေးခွန်း အရာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုဆိုလိုသည်, သင်ကအိမ်ထောင်စုသို့မဟုတ် home အတွင်းရာအရပ်ကိုကြာသောအရာအဖြစ်ဖြေဆိုနိုင်ပါ။ သငျသညျအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကချင်လျှင် သငျသညျရှေ့နေများ, သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းလူမှုရေးလုပ်သားများအတွက်ဒီဘာသာရပ်အထူးပြုစင်တာများ, သွားရောက်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ပြဿနာပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သင့်လျော်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူမည်သူမဆိုရရှိနိုင်စေတော်မူ၏။
အောက်ပါအဓိကအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ဆိုင်သည့်အခါအတူတူပင်၏ချိုးဖောက်သည်ဟုမှတ်ယူကြသည်ဟုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပြည်နယ်များအပေါ်ပညတ္တိကျမ်း:
အဆိုပါအိမ်ထောင်ဖက်များကသားစဉ်မြေးဆက်, တက်မွေးစား, မောင်နှမ, ဆွေမျိုးနီးစပ်, လူတိုင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့်အတူအသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သည်။
နိုငျမိုင်းနား, ဒါမှမဟုတ်သူအိမ်ထောင်ဖက်၏ချုပ်နှောင်ထား, အုပ်ချုပ်မှုစနစ်, မွေးစားစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၌ရှိကြ၏။
အဆိုပါကျူးကျော်အတူနေထိုင်ခြင်း၏နျူကလီးယပ်အတွင်းတည်ရှိသော protected လူတစ်ဦး။
လောလောဆယ်ကြောင့်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းမှများစွာသောလူယခင်အိမ်ထောင်စုမှပြန် လာ. , အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်, အားဖြင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်ဆွေမျိုးသားချင်းများအကြားအသစ်သောကးဖြစ်စေတဲ့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြပြီ။
မျှသာအခန်းဖော်အကြားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ရပ်များ fit မပါဘူး အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၏အယူအဆသူတို့ကုန်ကျစရိတ်လွတ်လပ်ခွင့်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီများမှာခွဲဖို့အတူတကွနေထိုင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်ပေမယ့်ကတည်းက။ ထိုသူတို့တွင်အဘယ်သူမျှမ Bond ဖြစ်စေသူတို့ကိုသို့မဟုတ်အိမ်မှာအဘယ်သူသည်ဤမိသားစုဝင်တစ်ဦးမှတဆင့်လည်းမရှိ။
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု WHO ကအညီဒါဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ဟောင်းတဦးမိတ်ဖက်များကကျူးလွန်အမျိုးသမီးတွေကိုဆန့်ကျင်စော်ကားမှု၏ရာခိုင်နှုန်းသူစိမ်းများကခံစားခဲ့ရစေခြင်းငှါသူတို့အထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဘယ်သူတို့အဆက်မပြတ်အကြမ်းဖက်မှုများအဆင့်ထိတွေ့ကြောင့့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတဲ့အလွန်မြင့်မားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေစေပါတယ်။
ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုအတွက်ဆယ်စုနှစ်မဆိုပဋိပက္ခတစ်မိသားစုအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဂုဏ်ထူးခြင်းမရှိဘဲ, ပါဝင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်သော်လည်းယနေ့ခေတ်နှင့်အစဉ်အမြဲဖြစ်ရပြီဖြစ်ပါတယ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူယောက်ျား, ရှားပါးသောဤအများသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဖက်များကလူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးအမုန်းရာဇဝတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးခံစားခဲ့ရမိသားစုအတွင်းနှင့်လူအားဖြင့်ခံစားခဲ့ရအကြမ်းဖက်မှုအကြားတစ်ဦးခွဲခြာလုပ်လာတယ်။ နှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းအတွက်ယောက်ျားစော်ကားသို့မဟုတ်စော်ကားမှုရှိခဲ့သည်အခြားယောက်ျားတို့ကအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဟုခေါ်တွင်သောအရာကို၌၎င်း, အမျိုးသမီးတွေလည်းမဟုတ်အခြားအမျိုးသမီးများကအနည်းဆုံးအများဆုံးကိစ္စများတွင်, လူစော်ကားနေကြတယ်။ နေကြသည်
ထို့ကြောင့်တစ် subdivision ပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများပညတ်တရားတော်ဖန်တီးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်း, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုက CP ၏ Corpus အတွင်းကျားမအကြမ်းဖက်မှုများကိုခေါ်
ဒါဟာကိုယ်နှိုက်အတွက်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၏တိကျသောနေ့ကမတည်ရှိပါဘူးဒါပေမယ့်လည်းမရှိ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့။ တစ်ဦးချင်းစီ 25 နိုဝင်ဘာလ 1981 ကတည်းကအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်နေသောကြောင့်သူ၏အခြေအနေမှာသာလောကရှိအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသိအမြင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။
သူတို့ကကျား, မအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားသူအဖြစ်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်များတွင်ဖြစ်စေကြပြီသူတွေကိုအကူအညီပူဇော်ကြောင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု, ကွာရှင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှု သူတို့ကတစ်ဦးခက်နှင့်ရှည်လျားသောလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု, အိမ်ကထောက်ခံမှုနှင့်အတူသူတို့ကိုသံသရာကိုပိတ်ဖို့ကကူညီဖို့လူအုပ်စုများနှင့်အတူပါဆုံးကိစ္စများတွင်ရေတွက်ဖို့လိုတယ်ဖြုန်းသူတွေကို။
အဆုံးမဲ့ရှိပါတယ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကွဲပြားခြားနားသောလူဦးလွှမ်းခြုံတဲ့ပါရာဒိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်, ယောက်ျား, လူငယ်, အမျိုးသမီးများ, ကလေးများသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုထံမှ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှုကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်အတူတူပင်များအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများကထောက်ခံသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု: ရိုက်တွန်းအားပေးသို့မဟုတ်အခြားသူများအကြားကန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်, အနာ, အမည်း, အညိုအမည်းအတွက်ပျက်စီးခြင်း။
အကြမ်းဖက်မှုဝတ်ထု: တန်ဖိုး, စိုးရိမ်မှုတွေ, ခြိမ်းခြောက်ခြင်း, အသံတွေသို့မဟုတ်ငြူစူသောစိတ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု: Assault နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းကြပ်။ တဦးတည်းပါတီလိင်အားဖြင့်တစ်ဦးမလိုချင်တဲ့ရဖို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လူတစ်ဦးကျော်အာဏာအလွဲသုံးမှု။
စီးပွားရေးအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု: ဒီကအရမ်းဘုံနှင့်မကြာခဏရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းပါတီအလွန်မကြာခဏနှင့်အရှက်ဖြစ်ပါတယ်ပါဘူးသည့်အခါပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ငွေညှစ်၏ဆင်းရဲချို့တဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏အကြောင်းရင်းများအများအပြားရှိနိုင်ပါသည် အများအပြားအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်ရမှန်းအံ့သြနေကြသည်ဘာဖြစ်လို့နှင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံးဒီလိုမျိုးနေထိုင်နေလျှင်ဒါအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၏ရာဇဝတ်မှု, ပညတ်တရားအားဖြင့်အပြစ်ပေးဖြစ်ပါတယ်တိုင်ကြားနှင့်အတူတကွအဖြေတစ်ခုရှာရဲကိုသွားဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဖြစ်ပေါ်သည့်အခါမကြာခဏသားကောင်များမှသူတို့ကိုမမေးအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏ဓာတ်ပုံများကိုယူဒီကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသရုပ်ပြဖို့တရားခွင်အတွင်းကကူညီကြလိမ့်မည်လို့ပဲ။ ဒါဟာရှေ့နေအမှုအနိုင်ရအသုံးပွုနိုငျသောအဓိကစမ်းသပ်မှု၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။
ဒါဟာရာဇဝတ်လုပ်ရပ်ကျူးလွန်သူကိုသူတို့ဝမ်းနည်းခြင်းပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်အထူးသဖြင့်အဘို့, ဤအရာအလုံးစုံကိစ္စများတွင်စမ်းသပ်ဖို့လာအရေးကြီးပါသည်။ နှင့်အခြားအလွန်အရေးကြီးသောအကြောင်းရင်း, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပိုမိုကိစ္စတွင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတရားသူကြီးများ၏ပိုပြီးရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်ကြောင့်ပိုပြီးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများနှင့်သက်သေခံချက်ရှိပါတယ်ကြောင့်ဥပဒေရေးရာတိုက်ပွဲဖြေရှင်းဖို့ ပို. ပို. ရိုးရှင်းသောများမှာအောင် ထုတ်ပေးရရန်စမ်းသပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်မှုတွေထောက်ခံ။
စိတ်ခံစားမှုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု, တစ်စုံတစ်ဦးမှမကောင်းတဲ့ခံစားရဖို့မလို့, သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးများသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်သွားလုပ်ရပ်များအတွက်စေ့စပ်ဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို အသုံးပြု. စိတ်ခံစားမှုငွေညှစ်မှတဆင့်လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရှာကြံကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဤကိစ္စတွင်အတွက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ။
လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသစ်ကိုအချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အဆိုပါလေ့လာမှုများ, စာရင်းဇယားများနှင့်ဥပဒေများတွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့။ ဤရွေ့ကား, အသစ်သောမိသားစုမော်ဒယ်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းသတိမပြုမိသွားပြီနှင့်ဤပြစ်မှုများ, ချိုးဖောက်မှုများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုအခြားအိမ်ထောင်စုထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကျူးလွန်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အချိန်ရှိပါတယ်သိရသည်။
အဘယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်အကြမ်းဖက်မှုများအားလုံးလုပ်ရပ်များတန်းတူဖြစ်ကြပြီးအားလုံးဘဝတစ်ဦးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတန်းတူတန်ဖိုးကိုရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအလူသတ်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်း, မကြာခဏတဦးတည်းကျားအကြမ်းဖက်မှုများအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်အခါကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ် run သောလူ။
စာရင်းအင်းယောက်ျားကအခြားလူတို့လကျမှာအများဆုံးကိစ္စများတွင်အသေခံခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲ related မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်နေကြသည်။ ပြောင်းပြန်ပြည်တွင်းနယ်ပယ်ထဲမှာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများသောအားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်အမိန့်အလားတူပုံစံအောက်မှာထုတ်လုပ်နေသည်။
အတော်များများကလေ့လာသုံးသပ်ကြီးစိုးမိသားစုပုံစံနေရာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၏ဇာစ်မြစ်အဖြစ် နှင့်ကျား, မ။ ယဉ်ကျေးမှုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့စတင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကထိုကဲ့သို့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုများပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်အဖြစ်လမ်းရှိခရိုင်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
သမိုင်းကိုသူတို့ကောင်းစွာအမိန့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်မိသားစုဘိုးဘေးအယူဝါဒမှတဆင့် dictate နိုင်အဖြစ် (ယောက်ျားကဖွဲ့စည်း) ကိုပြည်နယ်တစ်ခုအစိုင်အခဲပါဝါခဲ့ကြသည်ကိုယ်စားပြုဖြင့်မိသားစုများတည်ထောင်, ထီးကျား၏အာဏာန်းကျင်အတုထားပြီး တစ်ဦး "ကောင်းသောမိသားစု" အတွက်သင့်လျော်သော။
သည်နှင့်တစ်မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သင့်သောအရာကိုအကြောင်းကိုဤသည်အာဏာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းအများအပြားအယူဝါဒဖြန့်ချိခဲ့ကြသည့်အခါယနေ့နေဆဲအိမျတျော၌ထိုလူသောစိတ်ကူးကြူးကြောင်းအာဏာနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုတစ်စကေးဖန်တီးခဲ့ပြီး အရာအားလုံးသည်၎င်း၏ထူထောင်နိုင်ရန်ယူစိုးမိုးနှင့်ကိုထိန်းချုပ်ရပါမည်သူကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပြည်နယ် (အထီး) ။
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတစ်ဦးတည်းသာတိုင်းပြည်ကိုတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အခွအေနေမဟုတ်ပါဘူး။ အတော်များများကအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်ပိုပြီးထိရောက်သောဖွံ့ဖြိုးဆဲစဉ်းစားအခြားနိုင်ငံထက်ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအတွက်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုယုတ်ညံ့သည်ဟုမထင်, ဒါမှမဟုတ်လိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းဥပမာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပိုပြီးအမျိုးသမီးတွေထိန်းသိမ်းထားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သောသူတို့နှင့်အတူလူဦးသေဆုံးခဲ့သည်ကိုသာ 2015 1600 အတွက်ကြောင့်အပါမယ်အရှိဆုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများထဲကတစ်ခုဖြစ်သော်, စိတ်ပျက်စရာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၏အရေအတွက်ကိုရှိပါတယ်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးမှာလူသတ်မှုအတွက်တက်အဆုံးသတ်လျှင်, မိသားစုပြိုကွဲအိမ်တော်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ irreparable ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏အသေးငယ်ဆုံးထုတ်လုပ်အလွန်ကြီးမားသည်ဖြစ်သောကြောင့်, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏အကျိုးဆက်များ, ကြီးကျယ်သောဖြစ်ကြသည်။
အပြုအမူ၏ဤအမျိုးအစားအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံအတွက်ဖြစ်ပေါ်သည်စီးပွားရေးအခြေအနေရရှိထားသူနေပါစေ, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အထူးသဖြင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုအခြေအနေမှာပေါ်ပေါက်နိုင်, နာမည်ကျော်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စတွင် Osvaldo Rios အဖြစ်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအများအပြားတိုင်ကြားမှုများကိုပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးလူသိများတဲ့သရုပ်ဆောင် Telenovelas ဖြစ်ပါတယ်။
အလှည့်အတွက်သူတို့ပါဝင်သည်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများရှိသည်သောအကြမ်းဖက်မှုများစပိန်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအတွက်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာ code အတွင်း။
ဥပဒေမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ကံကောင်းထောက်မစွာ, ယနေ့သင်ပြီးသားအများအပြား data တွေကိုဖတ်နိုင် စပိန်လယ်ပြင်၌အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု, ဒီသက်ရှိပြုလုပ်ခြင်းအားကောင်းလာပြီဖြစ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောအလေးနှင့်အတူပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဥပဒေရေးရာအငြင်းပွားမှုများအဘို့စမ်းသပ်ရပ်ပေးနိုင်သည်။